Public Kura | » यसकारण सिद्धार्थनगरमा काँग्रेस जित्नुुपर्छ यसकारण सिद्धार्थनगरमा काँग्रेस जित्नुुपर्छ – Public Kura
यसकारण सिद्धार्थनगरमा काँग्रेस जित्नुुपर्छ
नेपाली काँग्रेसले आन्तरिक संघर्ष एवं वैचारिक द्वन्द्वलाई तातकालिक रुपमा थाती राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँढंगले जनलहर सिर्जना गरिरहेको छ । यतिबेला कँग्रेसजन जान–अनजान एवं बाध्यतावस गठवन्धन गरेर चुनावी महासंग्राममा होमिएका छन् । मिलेर सरकार चलाउनु, मिलेरै चुनाव लड्नु, कार्यगत एकता गर्नु भनेको परिवर्तित लोकतन्त्रको नयाँ संस्कार ठानुपर्दछ । नेतृत्वले देस, काल, समय परिस्थिति अनुकुल चल्नसक्नुपर्ने बाध्यता एकातिर होला । तर, नेतृत्वको त्यो सोच आमजनमानसमा नपच्न पनि सक्छ ।
गणतन्त्र र संविधानको बचाउ एवं कार्यान्वयन गर्दै देसको समृद्धिसंगै जनतालाई सुखी राख्ने सवालमा काँग्रेसले नेतृत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो, यो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवाधिक निर्वाचन हो । यसर्थ, नयाँ ताजा जनादेसका निम्ति यही वैशाख ३० गते दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा काँग्रेसले सवैदलहरुलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराउन सफल देखिएको छ । दुईतिहाई बहुमतको दम्भले नेकपा एमालेले विचमै संसद विघटन गर्दा मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग एवं ध्रुविकरण आएकोमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । व्यवस्था एवं विधिलाई सही ट्रयाकमा चलाउन काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेर अग्रगमनमा लम्कँदै आसन्न चुनावी वातावरण तयार भएकोमा कसैले शंका, द्वयश नगरी अगाडि बढ्दा नै बेश होला ।
चुनाव स्वच्छ, मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्न सवै दल एवं उम्मेदवार र समर्थकहरुले मतदाताहरुलाई सम्मान गरौं । मतदातालाई अधिक रुपमा भयवित, लोभ, प्रलोभनमा पार्ने कार्य कसैले नगरौं । यो चुनाव सवै राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुको अग्नी परीक्षा हो । अग्नी परीक्षामा भागलिने सवै दल एवं उम्मेदवारहरु सम्मानका पात्रहरु हुन । राजनीति एवं चुनाव मुलुकको निम्ति मुटुको चाल जस्तै हो । यस स्थानीय चुनावमा देसभरीबाट सवालाख उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् । यदि यसरी उत्साहजनक रुपमा उम्मेदवारहरुले भाग नलिएको भए शाहीकालको जस्तो चुनावको के अर्थ र महत्व ? भूमिगत रुपमा हिंसाको राजनीति गर्नेहरु, अलग पहिचान खोज्नेहरु पनि अहिले यही संविधानमा टेकेर चुनावी मैदानमा खडा भएर मतदाताहरुलाई फकाउने कार्यमा व्यस्त छन् ।
आफ्नै दलका नेता र उम्मेदवारहरुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदैं आवेगमा आएर दलको सिफारिसविना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुको लहरले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो रोग गठवन्धन भित्रका काँग्रेस, जसपा, माओवादी तथा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भित्र बढ्ता देखिएको छ । त्यसमा काठमाण्डौं, चितवन, पोखराको घटनाले बढ्ता चर्चा पाएको यतिवेला हामी सवैले महशुस गरिरहेको विषय हो । अनायशका चुरीफूरी र असन्तुष्टिहरुलाई पनि विस्तारै थमथमाउने प्रयास जारी नै देखिन्छ । काँग्रेस संस्थापक नेता विपीको आदर्श मार्गलाई पन्छाउँदैं वर्तमान नेतृत्वले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनैतिक दलहरुसंग मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुलाई सिधैं बेठिक भन्न पनि सकिँदैन ।
चुनावमा गठवन्धन गर्नु, मिल्नु ठिक र बेठिकको तर्कले अहिले हामी आफ्नै कारणले आपसमा अल्झनमा छौं । यतिवेला अल्झिने वेला होइन्, बैशाख ३० गतेको मतदानको समय पनि आउन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । यस्तो परिस्थितिमा काँग्रेसका जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ताहरु सक्रिय भएर आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जिताउनतर्फ नलागी अरु दलका उम्मेदवारलाई भोट दिने हो भने त्यो जस्तो वेइमानी र घातीलाई कुनैपनि पार्टीले माफ दिने अवस्था रहँदैन ।
अर्कोतर्फ रुपन्देही जिल्लामा प्रजातन्त्रको विगुल छर्ने शहिद र राष्ट्रिय राजनीति एवं सरकार संचालनमा समेत विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने नेतागणहरु छन् । अहिले पनि परिआउँदा निमित्त प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमालेका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विण्णु पौडेल, केन्द्रिय सदस्य एवं पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री घनेश्याम भूसाल, राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक बोहोराको नामले वेलावखतमा देसबासीलाई व्यूँताउने गरेको छ । तर, यी हस्ती नेताका सामु प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ देउखुरी सर्नुलाई रुपन्देही एवं तत्कालीन लुम्बिनी अंचलवासी पचाउन नसकेको दुःखद अविस्मरणीय घटना बनेको छ ।
अब बितेको कुराबाट पाठ सिकेर देस र देसबासीका निम्ति स्थानीय तहको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व आवश्यक जस्तै बनेर आएको छ । बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सवै मतदाताहरु एकजुट भएर मतदान गरौं । रुपन्देही जिल्लाका १६ पालिकाहरुमध्ये सिद्धार्थनगरको कुरा गर्नुपर्दा देसकै पूरानो नगरपालिका भएर पनि विकासमा अन्यभन्दा पछाडी परेकाले अब दु्रतगतिमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अबको सिद्धार्थनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शहरका रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । किनकी भैंरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही जेठ २ गतेदेखि पूर्ण रुपमा नियमितढंगले संचालन हुँदैछ ।
यो विमानस्थल निर्माणको अवधारणा, भैरहवा–बुटवल व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना, निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र (सेज), भैरहवा भन्सारको स्तरउन्नती एवं इन्टरमोडलको अवधारणा यही सिद्धार्थनगर भैरहवा निवासी काँग्रेसका नेता स्व. रामकृष्ण ताम्राकारले गरेका थिए । उनीले धर्ती छाडेर गए, तर उनको अवधारणा र सपना अहिले साकार भएको अवस्था छ । यो २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको काँग्रेसले उठाएको एजेण्डा थियो ।
सिद्धार्थनगरमा काँग्रेसले बहुदलपछिको पहिलो कार्यकालका मेयर डा.बलराम गौतमले र सद्भावना पार्टीका उपमेयर रतनकुमार गुप्तालगायत तत्कालीन नगरबोर्डका सदस्यले दुरगामी सोच राखेर गरेको निर्णय र एडीवीसंग सहयोग लिने कुरा नै अहिले नगरपालिकाभित्र देखिएको विकास हो ।चाहे भैरहवा–बुटवलको ६ लेन सडकको लागि घर नक्सा पास गर्दा छोड्नुपर्ने जग्गाको मापदण्ड, जनकपथ सडक, विपी पथ, वस पार्क, ट्रक पार्क, गल्लामण्डी एयरपोर्ट सडक, बुद्धचौक एयरपोर्ट सडक विस्तारमा तत्कालीन नगरबोर्डले दिर्घकालीन सोच राखेर गरेको निर्णय अहिले प्रमाणित भएको छ ।
२०२४ सालमा स्थापना भएको सिद्धार्थनगरमा ५५ वर्षको अवधिमा काँग्रेसले ३ वर्ष मात्रै काम गर्ने मौका पाएको छ । अब त अति नै भयो नगरवासीले यस पटक गठवन्धनको समावेशी उम्मेदवारहरु मौका दिएर हेरौँ, कि कसो ?यत्रो समय काँग्रेस किन नगरमा जितेन भन्ने पनि उत्सुकता हुनसक्छ । नगर, क्षेत्र जिल्लामा काँग्रेस बलियो छ, तर चुनावमा अन्तर्घातको दुष्परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म भोगिरहनुपरेको छ । अब त्यसकिसिमको परिणाम एवं हर्कत गर्दा आफैलाई घाटा, क्षति पुगेको काँग्रेसी स्वयंले बुझ्न नितान्त जरुरी छ । केही कुरामा चित नबुझेपनि अब पनि गल्ती दोहोराउने र दाँयावाया सोच्ने काम नगरी आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई आत्मैदेखि भोट दिन र दिलाउन लागौं ।
नगरवासीले चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरुमध्ये जसले सिद्धार्थनगरको समग्र रुपमा सर्वाङ्गीण विकास गर्नसक्ने, नगरवासीको भावना र आवश्यकता पुरा गर्नसक्ने, गाउँ, नगरदेखि प्रदेश एवं केन्द्रसम्म मिलेर योजना, बजेट, नयाँ दीर्घकालीन योजना र भिजनहरु बोकेर काम गर्नसक्ने नेतृत्व छान्न जरुरी छ । अन्य पालिका तथा सिमापारी छिमेकी देस भारतलगायत विदेसीलाई नेपाल सिद्धार्थनगर भैरहवाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यापार विकासप्रति लजित पार्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छैन भन्ने र चुन्ने मौका यही नै हो । त्यसैले सवैमा चेतना भया, बेलैमा विचार पुराएर मतदान गरौं । यसपटक सिद्धार्थनगरमा काँग्रेसलाई मौका दिन काँग्रेस एकजुट हौं ।